Qubanaha » Mooshin laga Gudbiyey Wasiirka Arrimaha Dibadda Yuusuf Garaad
Mooshin laga Gudbiyey Wasiirka Arrimaha Dibadda Yuusuf Garaad
Illaa 12 Xildhibaan oo ka tirsan golaha shacabka ayaa mooshin ka gudbiyay Wasiirka Arrimaha Dibadda Soomaaliya Yusuf Garaad Cumar, si wax looga weydiiyo ku dhaqan la’aanta faritaanka sharci Lr. 112 sharciga shaqaalaha arrimaha dibadda ee dalka ka dhaqan galay 05/09/2013 gaar ahaan qodobkiisa 1aad(b) iyo qodobka 4aad ee shuruudda diblomaasiga dibadda loo diraayo.
Qodobka laad: Samaynta iyo baabi’inta Ergooyinka diblomaasiyadda iyo Qunsuliyadaha
Inuu yahay Soomaali; yaqaanana Af-Soomaaliga (Maay & Maxaa Tiri) hadal & qoraalba b. Inuu ka diiwaan gashan yahay Guddiga Qaranka ee Shaqaalaha Rayidka ah,
d. In la hubsado isagoo la marinayo Hay’adaha Qaranka ee ku shaqada leh in aanu dambi gelin,
e. Hadii aanu ahayn Xirfadle ama Shaqaalaha hoose, waa in aqoontiisu tahay ugu yaraan heer jaamacadeed, islamarkaana uu qoraal iyo ku hadalba si fiican u yaqaan ugu yaraan mid ka mid ah afafka Carabiga, Ingiriiska iyo Faransiiska, In uu dhimirkiisu fiyowyahay, jir ahaan iyo iyo lixaad ahaanba gudan karo howlaha diblomaasiyadda,
In uusan leheyn wax balwad ah ee wax u dhimi karta sharaftiisa iyo gudashada waajibaadkiisa Qaran.
In uu buuxiyay shuruudaha ka mid noqoshada shaqaalaha Wasaaradda ee ku xusan Qodobka 3aad: